Qalabka dhismaha ee maqan
Su'aal Qalabka dhismaha ee maqan
6 bilood 1 toddobaad ka hor #1307 by tharat
Marka aan u duulo garoomada diyaaradaha qaarkood (inta badan garoomada diyaaradaha Mareykanka) waxaa ka maqan terminaalka iyo garoonka diyaaradaha guud. Ma jiraa wax sax ah oo ku saabsan tani?
ra'iisul wasaaraha 10
Bilood 6 6 maalmood ka hor #1311 by ra'iisul wasaaraha 10
aad u hubisay goobaha si ay u arkaan waxa qoto dheer ee aad leedahay
5 bilood 1 toddobaad ka hor #1339 by jduca
Waxaan lahaa dhibaato la mid ah oo aan ku xallilay adigoo bedelaya amarka Addon Sceneery culeyskiisa. Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad hesho barnaamijka lacag la'aanta ah ee lagu magacaabo Config Editor iyo tijaabiya isbeddelada nidaamka sida wax u dhacaan. Nasiib wacan.
5 bilood 1 toddobaad ka hor #1340 by jduca
Waan ka xumahay. Magaca barnaamijka waa Editor Editor Configure.
5 bilood 1 toddobaad ka hor #1341 by tharat
Waad ku mahadsantihiin jduca Halkaan ayaan ku arki doonaa!
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.296